समाचार Archives - Page 118 of 164 - Bagaicha.com
अाफ्नै निर्णय कार्यनयन गर्न सकेन सरकार…………
१४ असार २०७५, काठमाडौं - दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्र्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा भौति...
काठमाडौँ अब पुरुषले पनि नर्सिङ गर्न पाउने भएका छन् । नर्सिङ शिक्षामा पुरुषलाई विभेद गर्न नहुने माग उठिरहेका बेला सरकारले पुरुषले पनि नर्स बन्न पाउने निर्णय गर्रको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नर्सिङ अध्ययन हुने सबै कलेजमा १५ प्रतिशत पुरुषलाई पढाउने भएको छ । अन्य मेडिकल प्रोफेसनमा पुरुष र महिला सबैले पढ्न पाउने अधिकार भए पनि करिब २५ वर्षदेखि नर्सिङमा महिलाले मात्र यो अव...
दसैंअगाबै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने …………
१२ असार २०७५, काठमाडौं - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई तीन महिना म्याद थप गरेपछि उसले दसैंअगाबै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीबीच गत शुक्रबार भएको सम्झौताअनुसार आगामी दसैैंभित्रै खानेपानी काठमाडौं ल्याउने सहमति भएको हो। ‘मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच दसैंअगाडि नै मेलम्चीको पानी सुन्...
बस्तीमा बाढीको त्रास………
१२ असार २०७५, सिरहा - पश्चिम सिरहाको कल्याणपुर–२ चत्तरी टोलका पशुपति मुखियालाई बादल मडारिन थालेपछि गत वर्ष बाढीले सताएको सम्झना आउँछ । गत वर्ष कमला नदी, लोहजारा र घुर्मी खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा उनका भैंसी, गोरु र बाख्रा बगे । अन्नपात बग्यो । छोराछोरी र आफ्नो ज्यान बल्लतल्ल जोगाए उनले । दुई दिनसम्म बस्ती नजिकको स्कुलमा गएर बस्नुपरेको थियो उनको परिवार । त्यतिबेलाको पीडा सम्झिँदा बसाइँ सर्न म...
असार ११ २०७५ म्याग्दी — एउटा अक्करे भीर, दुहुनो गाई बन्न सक्छ ? धौलागिरि गाउँपालिका-४ मुदीको नाउरा भीर र पञ्चायत, बहुदल, माओवादी विद्रोह हुँदै गणतन्त्र र स्थानीय सरकारलाई भोट माग्ने र कमाउने भाँडो बन्यो । पञ्चायतदेखि बहुदलकालभरी हरेक वर्ष नाउराको भीरमा गोरेटो बाटो खन्न बजेट छुट्टिन्थ्यो । खासै प्रगति भएन । माओवादीले विद्रोहकालमा गाउँगाउँबाट मान्छे अपहरण गरी नाउरा भीर फोड्न श्रम शिविरमा राखे । र, ...
तीन महिना म्याद थपियो………..
असार १०, २०७५ काठमाडौं– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको म्याद थप तीन महिना थपेको छ । नयाँ सम्झौता अनुसार दशै अगाडि नै खानेपानी ल्याउने गरी काम शुरु हुनेछ । यो आयोजनाको निर्माण जेठ ३१ गतेसम्म सकिसक्नु पर्ने थियो । नयाँ सहमतिपछि अव यो आयोजना भदौमसान्तसम्म सक्नुपर्नेछ । तर, प्राविधिक हिसावले यो कठिन रहेको अधिकारीहरुकै भनाई छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको इटालियन ठेकेदार कम्...
अक्षरांकन पद्धतिले गुणस्तर खस्कियो………
१० असार २०७५, काठमाडौं - यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा शनिबार सार्वजनिक भएको छ। गत चैतमा सञ्चालित एसइई परीक्षाको नतिजा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शनिबार साँझ प्रकाशित गरेको हो। नतिजाअनुसार जिपिए ३.६५ देखि ४ (ए प्लस ग्रेड) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १४ हजार दुई सय ३४ जना छ। ३.२५ देखि ३.६० जिपिए (ए ग्रेड) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४६ हजार एक सय ३० र जिपिए २.८५ देखि ३.२० (ब...
एसईईको नतिजा प्रकाशित……….
असार १०, २०७५ काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार यसवर्षको परीक्षामा नियमित धारतर्फ चार लाख ५१ हजार ५३२ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । यस्तै प्राविधिक धारतर्फ ८ हजार ९०६ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार नियमिततर्फ जीपीए ३.६५ देखि ४ सम्म १४ हजार २ सय ३४ जना सफल भएका छन् । त्यसैगरी ...
काठमाडौ ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको बारेमा अनुसन्धानका क्रममा नयाँ नाम सार्वजनिक गरेको छ । सुन तस्करी बारे अनुशन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुन समितिले नयाँ नाम सार्वजानिक गरेको हो। समितिले भारतीय व्यापारि नागरिक बिमल पोद्दारलाई पक्राउ गरेलगत्तै पोद्दारबाट नयाँ नाम र प्रमाण फेला पारेको हो । पोद्दारसँग बयानका क्रममा पोद्दारले प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (...
४ प्रतिवादीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस………
असार ९, २०७५ काठमाडौं - ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले ४ अभियुक्तविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका ४ प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो । प्रहरीले दुबईमा होटल व्यवसाय गरिरहेका रामशरण खडका, गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीका दुबई बस्दै आएका भाइ रमेश उप्रेती, ...